Ubulawe wanqunywa uqhoqhoqho kufunwa ophaqa - Ilanga News
Home Izindaba Ubulawe wanqunywa uqhoqhoqho kufunwa ophaqa
Ubulawe wanqunywa uqhoqhoqho kufunwa ophaqa
SISHIYE umphakathi wakwaChappies, eMandeni uthuthumela isigameko sowesilisa (28) okuthiwa uklinye intombazane yakule ndawo ngentambo kagesi ngoMgqibelo, kwathi uma ebona ukuthi kayifi, wayinquma uqhoqhoqho, walala nesidumbu sayo ubusuku bonke ngoba ethi ufuna ophaqa ayeyiboleke bona.
Kunzima ukwamukela emndenini wakwaTembe kule ndawo ngomuga owehlele kubulawa uNkz Nomfundo Tembe (21) (osesithombeni). Kuthiwa umsolwa wake waya kwaTembe, wafika wasabisa unina kamufi ethi ufuna ophaqa bakhe, kungenjalo, kuzochitheka gula linamasi.
UNkz Duduzile Zibane ongumkhokheli kaNomfundo lapho esonta khona okhulumela umndeni wakwaTembe, uthi namanje kabakholwa yisihluku esisetshenziswe ngumsolwa.
“UNomfundo uhambe kubo eya kubangani bakhe kwaze kwahwalala engabuyi. Ekuseni, umndeni uthole umbiko wokuthi usebulewe.
“Uma sizwa, umfana umklinye ngentambo okuthe uma ebona ukuthi akafi, wathatha ummese wamnqamula uqhoqhoqho wahlala nesidumbu.
“Kuze kwafika intombi yakhe ekuseni yazithela kuye ehleli nesidumbu nommese awusebenzisile, yabaleka yahlaba umkhosi.
“Uma esho umfana, uthi uNomfundo nguyena omhlaselile endlini yakhe, yena ubezivikela. Okusixakayo wukuthi hlobo luni lokuzivikela ukuthi ungaze unqume umuntu,” kusho yena.
Ebuzwa ngendaba yophaqa, uthe: “Wake wafika (lona wesilisa) ezinyangeni ezintathu ezedlule kubo kaNomfundo eyofuna ophaqa bakhe.
“Watshela unina kaNomfundo ukuthi wathatha ophaqa bakhe kanti uma engababuyisi, uzomenzakalisa, akombuza lapho eqhamuka khona, yena akenziwa kanjalo.
“Unina akazange akunake lokho njengoba egcine eseyibulele ngempela ingane,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe kuboshwe owesilisa oneminyaka ewu-28 ubudala, kanti uzovela namuhla ngoMsombuluko eNkantolo yeMantshi yaseShowe ngecala lokubulala.
Previous articleIsicelo se-Chiefs kubalandeli ngomqeqeshi omusha
Next articleUZahara uphalaza usizi ngengoma